Nin magdhow $8 bilyan ku heley daawo naaso ka soo saartay oo uu cunay - BBC News Somali
Nin magdhow $8 bilyan ku heley daawo naaso ka soo saartay oo uu cunay
Image caption Johnson & Johnson sign
Shirkadda daawooyiinka soo saarta ee Maraeykanka laga leeyahay ee Johnson & Johnson ayaa lagu amray inay bixiso lacag dhan $8bilyan oo doolar ka dib markii nin daawo ay ka iibisay uu sheegay in aan looga digin in daawadaasi ay kobciso naasaha.
Garsoore fadhiya maxkamada Philadelphia ayaa magdhawgan u xukamay Nicholas Murray, oo 26 jir ah , waxa uuna kiiskiisa ka mid ahaa kumanaan kiis oo maxakmada yaalay islamarkna aan wali go'aan laga gaarin.
Qareenka Nicholas Murra ayaa ku doodayay in shirkadda J&J '"ay faaidadeeda ka doorbiday tan bukaanka"
Shirkadda J&J ayaa racfaan ka qaadan doonta go'aanka maxkamad, oo ay sheegtay in uu yahay "mid si aa ah u culus".
Kiiskan la xiriira daawada Risperdal, ayaa waxa uu sheegay Mr Murray in markii uu isticmaalay daawada ay ka soo saartay naaso.
Daawadan ayuu sheegay in uu dhakhtar u qoray sanaddii 2003 ka dib markii laga helay cudur dhanka maskaxda iyo xusuusta waxyeeleeya.
Shirkadda ayaa wajahaysa cabashooyiin dhowr ah oo ku aadan in sida la sheegay aysan ka digin waxyelada daawada Risperdal'.
Gabdho isdhuubid lagu qasbay oo magdhaw la siiyay
Gabadh 12 maalmood dhalan oo abaalmarin geesinimo ah la siiyay
Shirkadda daawooyiinka soo saarta ee Maraeykanka laga leeyahay firm Johnson & Johnso ayaa sidoo kale wajahaysa dacwado la xiriira doorka ay ku leedahay dadka la qabatimay daawada xanuun baai'iyaha nooca opioid .
Bishii August, shirkadda Johnson & Johnson ayaa waxa lagu amray inay bixiso lacag dhan $572milyan ka dib markii garsooraha maxkamada Oklahoma uu riday go'an ahaa in ay shirkadda qeyb ka qaadatay dhibaatada daawada xanuun baabi'iyaha nooca opioid "iyada oo shirkadda fidinaysa olola been abuur ah islarkana halis ah oo ku aadan xayiisiinta daawadan.
Shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay gudoonkaasi racfaan ak qaadan doonto.
27 Agoosto 2019